Izici Zezikhundla ze-SEO
NgoMsombuluko, Ephreli 3, 2017 NgoMsombuluko, Ephreli 3, 2017 Douglas Karr
Sisebenza nezinkampani eziningana ezinkulu kakhulu ekuthuthukiseni ukubonakala kwazo kosesho lwendalo njengamanje futhi simangele ngempela ukuthi ingakanani injini yabo yokusesha yangaphambilini engakanani ukubiza kubo, hhayi ukuzuza. Bebekhokha amafemu ngokoqobo abekwenza kungasebenzi kahle kwabo.
Enye inkampani yakha ipulazi lezizinda yabe isiveza amakhasi amafushane ngayo yonke inhlanganisela yamagama ayisihluthulelo etholakalayo, futhi yaxhumanisa wonke amasayithi. Umphumela waba ukuxubana kwezizinda, ukudideka komkhiqizo, nemiphumela yenjini yokusesha embi. Sithuthe saphinde saqondisa kabusha zonke izizinda saziba sodwa, sabe sesakha amakhasi afundisa kakhulu esihlokweni ngasinye… futhi kungakapheli izinsuku ezingama-90 asikho ezingeni elingaphezulu kwalapho lalikhona.
Uma umxhumanisi wakho we-SEO ukuthuthukisa uqukethe noma yimuphi umsebenzi ongaphandle kokuheha nokwenza ngcono isipiliyoni sesivakashi, kungenzeka uzifaka enkingeni. Douglas Karr, DK New Media
Le infographic evela kuDot Com Infoway yenza umsebenzi omuhle wokuhlukanisa futhi ubeke phambili umsebenzi okufanele ngabe uyawenza uma unethemba lokuthola ukubonakala:
Ukuphendula Kwamaselula - njengoba abasebenzisi benjini yokusesha abaningi basebenzisa iselula, ukuqinisekisa ukuthi ulungiselela umsebenzisi weselula kubalulekile, kufaka phakathi ukunciphisa isivinini sekhasi lakho leselula nokusebenzisa IGoogle AMP.
Imiphumela Yendawo - besabelana iminyaka lokho ukubonakala kosesho lwasendaweni kusiza ukubonakala kwezwe kodwa kusamangaza ukuthi zingaki izinkampani ezingalinaki leli thuba elihle kangaka. Qinisekisa ukuthi inkampani yakho ibhalwe ohlwini olufanele I-Google Yezebhizinisi bese usebenzisa izingcaphuno (I-NAP - Igama, ikheli, inombolo yocingo) kuwo wonke amakhasi wesayithi lakho.
Okuqukethwe kwekhwalithi nezixhumanisi - kulapho abacebisi abakhulu baphumelela futhi abesabekayo bekufaka enkingeni. Umgomo wakho kufanele kube ukwakha okuqukethwe okuhle (njenge-infographics) bese ukuwafaka kumasayithi afanele awakhombisayo (njengoba senzela i-DCI). Le infographic ibalulekile ezilalelini zethu ngakho-ke kunengqondo ukubaboleka ngokuxhumanisa emuva kusayithi labo. Noma kunjalo, ukubeka nje i-ad-hoc ama-backlinks ezizindeni ezingasebenzi, ezingekho esimeni esikahle ngeke zikufikise ndawo.
Amasu Wokukhuthaza - ukwakha amafomethi amaningi wokuqukethwe (i-audio, ividiyo, i-infographics, i-micrographics, i-socialgraphics), ukushaya umncintiswano wakho, ukungavumeli izixhumanisi ezingafuneki, ukukhuthaza ukubalulwa komkhiqizo, ukunikeza izimpendulo ku-intanethi, ukudala i-buzz yezokuxhumana, ukuthuthukisa ukuseshwa kwezwi nokugcina isayithi lakho likulungele wonke amasu amahle wokuqhakambisa okuqukethwe kwakho.
Nayi i-infographic, Izici Zezinga le-Google SEO kanye Namasu Wokukhuthaza we-2017:
Tags: alalelwayoukuxhuma emuvadciDK New Mediadot com infowayi-google ampgoogle ibhizinisi lamiizici zesimo se-googlei-google + ngebhizinisiukusesha kwendawoizinga lokusesha lendawoukubonakala kosesho lwasendaweniI-Marketing InfographicsAmavidiyo Wokumakethaama-micrographicsInombolo yocingo yekheli legamaI-NAPizici zesigabaseoamasu wokukhangisa we-seoIzici zesimo se-seoezenhlalo
Aug 12, 2011 ku-9: 56 AM
Ezingeni le-SEO nezindaba zethrafikhi ngaphezulu. Bonke abantu bazama ukuthola isikhundla esiphakeme nokugcwala kakhulu. Ngokuthola okuqukethwe okuningi kwetrafikhi, igama elingukhiye, isivinini sokulanda ikhasi konke kufakiwe. Nayi i-infographic enhle yokuhlaziya isayithi lakho ngamagama ahlukile.
isevisi yokwakha isixhumanisi
Dec 10, 2011 ngo-2: 29 PM
hehehe…. ingcaca enkulu impela, futhi iyathandeka ngempela, icace bha…
Ukuba inombolo yokuqala akuyona umsebenzi olula, kufanele ube nekhono lokwakha futhi kufanele uzimisele ukusebenza kanzima ngempela.
Ngo-Apr 6, i-2017 ku-12: 32 AM
Thanda i-infographic! Siyabonga ngale ndatshana enhle kakhulu uDouglas! Bengizibuza, ucabanga ukuthi ukuthumela izivakashi njengecebo lokwakha izixhumanisi kusazosebenza kulo nyaka?
Ngo-Apr 6, i-2017 ku-12: 35 AM
Yebo… kepha njengomshicileli ngiya ngikhathala ngempela ngama-athikili esigamu wembongolo lapho abantu bezama nje ukufaka isixhumanisi kusayithi lami. Anginankinga ngesixhumanisi lapho imininingwane iyamangalisa futhi inenani ezilalelini zami. Noma yini enye iyisihlamba nje, noma kunjalo.
Ngo-Apr 6, i-2017 ku-8: 52 AM
Kumele ngivumelane nawe 🙂 kepha kuhlala kunokuhlukile. Uma i-athikili ibhalwe kahle futhi inika inani, isixhumanisi besingalimazi.
Ngo-Apr 18, i-2017 ku-11: 04 AM
Izixhumanisi zekhwalithi empofu empeleni can ubuhlungu, noma kunjalo!